Legal help and services in the USA can costalot of money. Legal issues can be very confusing. တခါတလေ, it is hard to know when to getalawyer. သငျသညျဒုက္ခသည်တစ်ဦးဖြစ်မည်ဆိုလျှင်, you can ask your resettlement agency for advice.
If you haveabig family event or change such asadivorce, adoption, or death. သို့သော်, most of the time you do not needalawyer to get married.
အမေရိကန်ဥပဒေအောက်တွင်, if you are seeking help or required to cooperate withagovernment agency or an organization funded by the government, you must be provided with language help. If you do not speak English well, you can receive interpreter for the following services:
သငျသညျအကွောငျးကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ် your right to assistance in your language: basic information about Federal Language Access Rights.
If you are in immigration court, you must get help only fromaလိုင်စင်ရရှေ့နေသို့မဟုတ်အသိအမှတ်ပြုကိုယ်စားလှယ်. It is very important that you get immigration help only from organizations or individuals approved by the Board of Immigration Appeals (BIA). သငျသညျအကူအညီတောင်းသင်၏မိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်မိသားစုကိုမေးခဲ့လျှင်, သူတို့မတော်တဆသင်သည်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူဒုက္ခ၌သငျရနိုငျသောမမှန်ကန်သောအချက်အလက်ပြောပြပါလိမ့်မယ်.
If you need legal help for immigration, သင်လုပ်နိုင်သည် find low-cost attorneys and legal help. If you are using an online website to find legal forms, make sure you are using the အဆိုပါfficial United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) ဝက်ဘ်ဆိုက်.
အစစ်အမှန်ရှေ့နေများမဟုတ်သောလူစုထဲကကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဤအချက်အလက် Read! There are people who will pretend to help you so they can keep your money.They will try to make you pay foralegal or immigration service but not actually help you. သူတို့ကိုအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ!
အဆိုပါပြောင်းရွှေ့လာသောလူဥပဒေရေးရာအရင်းအမြစ်စင်တာ (ILRC) လိမ်လည်မှုထံမှသင်တို့ကာကွယ်ပေးရန်သတင်းအချက်အလက်လုပ်. သင်လုပ်နိုင်သည် အင်္ဂလိပ်သတင်းအချက်အလက်ကိုဖတ် and download. သို့မဟုတ်သင်လုပ်နိုင် စပိန်အတွက်သတင်းအချက်အလက်ကိုဖတ် and download. Before you getalawyer, be sure to talk to your case manager oratrusted person in your community.
ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုထံမှလာ LawHelp.org နှင့်အခြားယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းရင်းမြစ်. ဒါဟာလမ်းညွှန်မှုများအတွက်ရည်ရွယ်သည်နှင့်အမျှမကြာခဏတတ်နိုင်သမျှမွမ်းမံ. USAHello ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုမပေးပါဘူး, မဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းများမဆိုဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ရည်ရွယ်ထားပါသည်. သင်တစ်ဦးအခမဲ့သို့မဟုတ်တန်ဖိုးနည်းရှေ့နေသို့မဟုတ်တရားဝင်အကူအညီရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ အခမဲ့နှင့်တန်ဖိုးနည်းဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေ.